प्रम ओलीको उपचारमा सल्लाहकारको झमेला | रुपान्तरण
प्रम ओलीको उपचारमा सल्लाहकारको झमेला
१७ मंसिर २०७६, मंगलवार १५:१८
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री के पी ओली टेलिभिजनमा आफूले चाहेको कार्यक्रम हेर्न सक्ने भएका छन । उनी बाहिरी गतिविधिबारे बढी जिज्ञासु छन । आफ्नो स्वास्थ्यका बारेमा जनतालाई सुसूचित गराउन चिकित्सकलाई आग्रह गर्छन । उनले नयाँ मिर्गौला प्रत्यारोपण विदेशमै गर्न चाहिरहेका छन । तर, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरु यसका लागि तारतम्य मिलाउनुको साटो खेलाची गरिरहेका छन ।
चिकित्सकहरु १२ वर्ष अघि प्रम ओलीको शरीरमा प्रत्यारोपित मिर्गौलाले कामगर्न छाडेपछि उनलाई विदेश लगेर अर्को मिर्गौला प्रत्यारोपणगर्न चाहिरहेका छन । प्रम ओलीको स्वास्थ्यका बारेमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र सल्लाहकारको गतिविधिप्रति स्वयं प्रधानमन्त्री ओली र उनको उपचारमा संलग्न चिकित्सक समेत असन्तुष्ट छन । यही कारण हो, प्रम ओलीले अस्पतालको शैयाबाट जनताको नाममा भिडियो सन्देश दिने योजना तय गरे । भित्रिया सूत्रका अनुसार, गत मंगलबार विहान एपेन्डिसाइटिसको शल्यक्रियापछि भेन्टिलेटरमा राखिएको पुष्टि चिकित्सकबाट हुँदाहुँदै पनि सचिवालयका सल्लाहकारहरु समाचारको शीर्षकमा भेन्टिलेटर शब्द किन राखेको भन्दै पत्रकारसँग सवालजवाफ गर्दै थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई अमेरिका लैजाने बारे नेकपा सचिवालयमा मंगलबार घनिभूत छलफल भएको थियो । छलफल पछि नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफनो आसन्न चीन भ्रमण स्थगित गरे । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको निमन्त्रणामा दाहाल नेतृत्वको टोली मंसिर २४ गते चीन जाने तयारीमा थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीका सल्लाहकारहरुले उनको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरुलाई उनको स्वास्थ्य स्थितिबारे पत्रकार र अन्य कसैलाई पनि जानकारी नदिन चेतावनी दिएका छन ।
मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर एण्ड ट्रान्सप्लान्टको पाँचौ तलामा राखिएका प्रम ओलीको स्वास्थ्य बारे आफै जानकारी दिने सल्लाहकारहरुले बताएका छन । तर, संक्रमण हुने डरले गर्दा ती चिकित्सकले सघन उपचार कक्ष (आइसीयु) मा सल्लाहकारलाई जान दिएका छैनन । शल्यक्रियाको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्रीले कालो चिया पिएका थिए । त्यो विवरण पनि बाहिर नल्याउन सचिवालयका सल्लाहकारबीच अघोषित प्रतिस्पर्धा नै चल्यो । ‘प्रधानमन्त्रीज्यू आइसीयुमा नैै हुनुहुन्थ्यो । उहाँ मोबाइल चलाउन सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न थियो । मुख्य सल्लाहकार रिमालजी आफैले नै प्रधानमन्त्रीको नाममा ट्वीट गर्दिनुभयो । अखबारमा प्रधानमन्त्री आफैले ट्वीट गरेको भन्ने खालको विवरण आएपछि रिमालजी मख्ख पर्नु भयो’ सचिवालयका एक सदस्यले बताए ।
राधिका पनि दिक्क
सचिवालयका कर्मचारी र सल्लाहकारको चुरिफुरी देखेर प्रधानमन्त्री पत्नी राधिका शाक्य पनि दिक्क भएकी छिन । प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल, प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा, परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई लगायतका सचिवालय सदस्यहरु अस्पताल गएर श्रीमती शाक्यलाई भेटेर फर्कने गरेका छन ।
शाक्यले अस्पताल परिसरमा सल्लाहकारहरुले हेलचेक्रयाईं गरेको बताएकी थिइन । ‘कहिले यता जानु प¥यो भन्छन । कहिले उता जानु प¥यो भन्छन । राम्रोसँग आराम गर्न पनि दिंदैनन । अस्पतालमा कामै छैन र पनि आइरहन्छन’ शाक्यको भनाई उध्दृत गर्दै एक नर्सले बताइन ।
उपचारमा संलग्न एक चिकित्सकले रुपान्तरणलाई बताए : सल्लाहकारहरुको ‘सक्रियता’ यस्तै रहने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य थप संकटमा पर्ने निश्चित छ । प्रमको स्वास्थ्यका बारेमा जन चासोका सूचना लुकाउने र उपचारका लागि उहाँलाई विदेश लैजानेबारे भइरहेको परामर्शको पनि ट्वीटरमा खण्डन गर्ने सल्लाहकारहरुका कारणले कतै प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य संकटमा पर्ने त होइन ? हामीलाई त चिन्ता लागेको छ ।
मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालले मंगलबार ट्वीटगर्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई उपचारका लागि विदेश लैजान छलफल भइरहेको खबरलाई आधारहीनको संज्ञा दिएका थिए । ट्वीटमा उनको भनाई थियो ‘मिडियामा आउने उडन्ते समाचार देख्दा दुःख मात्रै होइन, मिडियाकर्मीको स्तरमाथि पनि दया लाग्छ । मूलधारका मिडियाले आफूलाई बतासे नबनाए उनीहरुकै भलो हुने थियो ।’ प्रधानमन्त्रीलाई स्तरीय उपचारका लागि विदेश पनि नलैजाने र स्वदेशमा भइरहेको उपचार र स्वास्थ्यव्यवस्था बारे खुलाउन पनि नचाहने सल्लाहकारकै कारण प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यमा खेलाँची भइरहेको चिकित्सकहरु बताउँछन ।
प्रधानमन्त्रीका तत्कालीन प्रेस सल्लाहकार कुन्दन अर्याललाई गलहत्याएर सूर्य थापालाई ल्याउन सफल मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमाल विवादमा तानिएका छन । सल्लाहकारबीच पनि सुमधुर सम्बन्ध छैन । प्रेस सल्लाहकार थापाले सिंहदरबारस्थित परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराईको कक्ष कब्जा गरेपछि दुबैबीच हार्दिकता रहेको छैन । भट्टराई अमेरिका भ्रमणमा रहेका बेला थापा प्रेस सल्लाहकार बनेका हुन । नवनियुक्त प्रेस सल्लाहकार थापाले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बस्ने अडान लिएपछि उनलाई राजन भट्टराईको कक्ष दिइएको थियो ।
मुख्य सल्लाहकार रिमालले प्रधानमन्त्री ओलीलाई उपचारका लागि विदेश लैजाने खबर सार्वजनिक हुनुलाई बतासेको संज्ञा दिएपनि उनका चिकित्सकहरु त्यसको तयारीमा लागेका छन । एक चिकित्सकले रुपान्तरणलाई बताए, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको पुनः मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्ने कुरा चानचुने होइन । त्यसमाथि देशमा आधुनिक स्वास्थ्य उपकरणको पनि अभाव छ । उहाँको मिर्गौला नेपालकै अस्पतालमा प्रत्यारोपणगर्न हामी नै हिचकिचाइ रहेकाछौं । थप उपचारका लागि उहाँलाई अमेरिका लैजाने सोचाइ बनेको छ । विदेशमा प्रत्यारोपणगर्न जति सजिलो छ त्यति नेपालमा छैन । प्रधानमन्त्रीज्यूका मुख्य सल्लाहकार नै बतासे भए ।’
डा. सायमीले हप्काए
प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा राख्दा अस्पताल आउन जान धपेडी हुने भएकाले चिकित्सकले एक साता सघन उपचार कक्ष (आइसीयु) मै राख्ने निर्णय लिएका थिए । अहिले सल्लाहकारकै कारण अप्ठेरो स्थिति सिर्जना भएको छ ।
‘सल्लाहकारहरुको चुरिफुरि यति धेरै बढेको छ प्रधानमन्त्रीज्यू लाई डिस्चार्जगर्न उनीहरु नै हतारिएका देखिन्छन । उपचार टिमका संयोजक डा. अरुण सायमीले ‘आफू पूर्व प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी सहित अन्य नेताहरुको पनि चिकित्सक भएको’ स्मरण गराउँदै सल्लाहकारहरुलाई चुरिफुरी नगर्न हप्काउनु परेको थियो ।